अभिनेता इरफान खानकी आमाको नि`धन, लकडाउनले गर्दा अन्तिम सं`स्कारमा जान नपाउँदा भिडियो हेरेर !भक्कानिएर रोए ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/अभिनेता इरफान खानकी आमाको नि`धन, लकडाउनले गर्दा अन्तिम सं`स्कारमा जान नपाउँदा भिडियो हेरेर !भक्कानिएर रोए !
काठमाडौं – बलिउडका चर्चित अभिनेता इरफान खानकी आमाको नि`धन भएको छ । उनकी आमा साइदा बेगमको ९५ वर्षको उमेरमा शनिवार नि`धन भएको हो । केही समयदेखि स्वा`स्थ्यमा समस्या रहेकी इरफानकी आमाको एककासी नि`धन भएको हो । आमाको निधन हुँदा इरफान अन्तिम संस्कारका लागि जयपुर जान पाएनन् ।
आमाको निधन भएपनि अभिनेता इर`फानले आमाको अन्तिम दर्शन समेत गर्न पाएका छैनन्। भारतमा भएको लकडाउनका कारण उनी आफ्नी आमाको अन्तिम सं`स्कारमा उपस्थित हुन नसकेको समाचारमा जनाइ`एको छ।समाचारका अनुसार यतिबेला इरफान खान आफ्नी प`त्नीसँग जयपुर भन्दा धेरै टाढा छन्।
जानकारी अनुसार इरफान खान पनि ठीक छैनन् । सन् २०१७ मा, अभिनेता क्यान्सरको उपचारको लागि विदेश गए । विदेशबाट फर्कने क्रममा इरफानले फिल्म अं`ग्रेजी माध्यमका लागि शुट गरे । फिल्म रिलीज पछि पनि, अभिनेता खराब स्वास्थ्य को कारण सबैबाट टाढा राखिएको छ ।